Tapitra ny ora iray minitra amin'ny sary vector nomerika | Famoronana an-tserasera
YouTube dia manome antsika fampianarana an-jatony an'arivony isan-karazany ny fandaharana famolavolana. Ny zavatra tokana dia ny fananana fotoana ilaina hanarahana ireo fampianarana an-tserasera izay nomen'ny mpamorona endrika an-jatony mba hampianarana ny hafa ny teknikan'izy ireo manokana na ireo torolàlana fototra hianarana ao amin'ny Illustrator, Photoshop, Maya na ilay sary mahazatra.
Anisan'ireo fampianarana an'arivony maro ireo izay ahitantsika ny Time Lapses tahaka ity izay zarainay avy amin'ireo andalana ireo ary azo ampiasaina jereo ny fanombohan'ny mpanao sary dizitaly hatramin'ny voalohany Ny sarin'ny avatar misy valiny tena tsara. Ambonin'izany rehetra izany, hitanao ny dingana raisiny amin'ny famolavolana ny fiolahana Bezier sy ny fomba fandokoany ny avatar an'io zazavavy io izay manana fangorahana.
Atombohy amin'ny rangotra, fa Miorina amin'ny sary namboariny izay manolotra ny hevitra voalohany momba ny fanovana ho lasa sary nomerika avo lenta.
Asa atomboka ny ampahany lehibe amin'ny tarehy toy ny endrik'ilay tovovavy, ny tendany, ny vatany ambony ary ny volony. Amin'ny endriny voalohany, manome ny fikasihana manokana sy miolakolaka amin'ny volo izy ary inona ny loko sasany hanomezana aloka sy ny taratra ilaina mba hanamafisana ny habeny.
1: 02 segondra ny Time Lapse izay mampiseho amintsika fa miaraka amina teknika kely sy fahaiza-mamorona amin'ny sary, dia azo aseho ny asa vita farany. Tsy mila mahay mahay manao sary na mahay Illustrator ianao, fa kosa maniry ny hianatra sy hanaraka ny torolalan'ny mpamorona sasany toa an'io izay mitady hampianatra ny fomba anehoana ny avatar an'ity zazavavy ity.
Raha te hanana iray ianao palette miloko tsara, mandalo ity fidirana ity miaraka amin'ny fitaovana izay hanampy anao amin'izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Fitaovana famolavolana » sary » Fotoana 1 minitra nandalovan'ny sary an'ny avatar